नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : छबिलाल र बाबुरामको उदण्डता र देशद्रोही कदमहरुको प्रतिफल !
छबिलाल र बाबुरामको उदण्डता र देशद्रोही कदमहरुको प्रतिफल !
हेर्नुस त सधैं मिलेर बसेका सबै जात जाती भाषाभासी नेपाली आज यसरी भड्किँदैछन् ! नेपाल मा त भड्किए भड्किए बिदेशमा पनि यो जात्रा ! खोइ कहाँ गयो नेपाली मन ?? खोइ कहाँ छ नेपाली पन ?? के यहि हो हामी नेपालीको परिचय ??